Malagasy, vahoaka. Ny Malagasy, aminny ankapobeny, dia ireo
ⓘ Malagasy, vahoaka. Ny Malagasy, aminny ankapobeny, dia ireo olona rehetra miaina ao Madagasikara. Ny olona tety ivelany no nanome io anarana hoe Malagasy io sy ..
Ny Maaniany na Daiàka maaniany na Daiàka baritô atsinanana dia zana-bondron ny vahoaka daiàka monina ao amin ny faritanin i Kalimantàna afovoanay ao amin ny nosy Bôrneô.
Ny sampy teo aminny finoan-drazana malagasy dia sary na tapa-javatra azo tsapain-tanana izay inoana fa mananan-kasina teo aminny foko maro eto Madagasikara. Fitambaran-javatra misy eny aminny natiora no anamboarana azy. Ny ody, izay karazana sampy isam-batanolona, dia ninoana fa miaro na manome hery ny mpitondra na ny mpiravaka azy. Hatraminny andevo ka hatraminny mpanjaka dia nanana ody. Ny sampy dia ninoana fa miaro ny mpiara-monina manontolo. Matetika dia nanana ny maha izy azy ny sampy tsirairay ka nanana ny trano sy ny anarany manokana ary ny mpikarakara azy manokana. Aminny faritra s ...
Ny Mikea dia vahoaka malagasy monina any anaty ala amin ny faritra atsimo-andrefan i Madagasikara izay mivelona amin ny fihinanana ny zavamaniry sy ny biby any anaty ala.
Ny antsoin ny Malagasy hoe Karàna dia ireo Indiana sy Pakistaney nifindra monina eto Madagasikara nanomboka tamin ny faramparan ny taonjato faha-17. Amin ny heviny mifintina dia ireo Indiana eto Madagasikara ihany no lazaina fa Karàna, fa amin ny heviny mivelatra kosa dia mahafaoka ny Indiana sy ny Pakistaney any India sy Pakistàna na any amin ny firenena hafa koa ny teny hoe Karàna. Miisa eo amin ny 25 000 eo ho eo ny Karàna eto Madagasikara araka ny antontanisan ny Ministeran ny raharaham-bahiny indiana. Ny ankamaroan ny Karàna tonga teto Madagasikara dia manaraka ny fivavahana silamo si ...
Ny fitodika mpanao ao aminny fitsipiteny sy haiteny malagasy araka anjara asa dia ny fitodiky ny fehezanteny mivany roa fara-fahakeliny ka misy tovona mi-, man-, maha -, sns ny matoanteny. Ohatra Mitaraina ny vahoaka.
Ny andro dia fe-potoana na tsingerim-potoana mifandraika aminny tsingerim-pihodinanny Tany aminny tenany. Aminny ankapobeny dia ny fiverenanny Masoandro aminny toerana efa nisy azy no amantarana ny fahafenoanizany tsingerina izany. Izany dia misy 24 ora eo ho eo ka ny fanombohany dia miovaova arakaraka ny fahazarana sy ny tetiandro ampiasaina. Ny teny hoe andro koa dia ilazana ilay fotoana ahitana na tokony hahitana ny Masoandro eny aminny habakabaka ka ahafahany manazava ny Tany, eo anelanelanny fiposahany sy ny filentehany, ka izany dia mifanohitra aminny atao hoe alina izay fotoana tsy ...
ⓘ Malagasy (vahoaka)
1. Ny fiavianny Malagasy
Ny ankabeazanny razanny Malagasy ankehitriny dia tonga taminny lakana na botry avy any Indônezia taminny taonjato faha-3 hatraminny taonjato faha-5. Ny amantarana ny fihavianny Malagasy avy any Indônezia dia ny fiteny teneninny Malagasy aminizao fotoana izao: fantatra fa misy fitovizana lehibe aminny fiteny sasany any aminny Nosini Bôrneô ny fiteny malagasy, indrindra eo aminny lafiny voambolana ampiasaina: rehefa manonona ny volana izao ohatra, ny fiteny indôneziana Bahasa Indonesia dia mampiasa ny teny hoe Bulan sy ny teny javaney hoe Wulan, mitovitovy fanononana aminilay teny malagasy, saingy ny fomba fanoratana fotsiny no miova.
Ny Malagasy koa dia manan-drazana avy any Afrika atsinanana sy Arabo, ka ny amantarana izany dia ny endrikireo Malagasy tandrefana sy tavaratra. Ny endriky ny foko mipetraka any Afrika atsinanana dia mitovy aminny Afrikana miaina eo aminny kontinenta afrikana. Ny fihavianizy ireo ao Afrika dia eo aminny tontolo soahily nentina ho andevo eto Madagasikara na nifindra monina.
Ny mahasamihafa ny vahoaka malagasy avy any Indônezia sy ny vahoaka malagasy avy any Afrika atsinanana dia ny endriny. Ny avy any Indônezia dia manana volon-koditra fotsifotsy kokoa noho ireo izay avy any Afrika, ary mbola tsotra kokoa ny volony noho ny Afrikana.
Ny foko eto Madagasikara dia miisa valo ambinny folo. Misy ny foko manana endrika aziatika kokoa, ny foko sasany manana endrika afrikana. Kanefa ny fiteninizy ireo dia tsy dia samihafa loatra aminny hafa ka manana voambolana iraisana ; ka noho izany dia mifankahazo fiteny ihany ny Malagasy avy aminny foko roa samihafa na dia tsy mitovy tanteraka aza ny fiteny. Ny teny malagasy ofisialy dia mampiasa ny voambolanny fiteny merina miaraka aminny voambolana iraisanny fiteny malagasy rehetra.
2. Ny foko eto Madagasikara
Ny foko eto Madagasikara dia vondronolona isanny vahoaka malagasy izay heverina fa iray faritra niaviana, nanana fandaminana ara-politika iraisany na nitoviany taminny vanimpotoana faha mpanjaka, manana ny fomba fitenenany ny teny malagasy izay atao hoe fitenim-paritra. Mahazatra ny maro ny miteny hoe "foko valo ambinny folo" na dia mety tsy mifanandrify aminny tena marina izany. Tsy singa amaritana ny atao hoe "foko" eto Madagasikara na ny fihodirana, na ny toetranny volo, na ny toe-batana.
Tsy nisy ezaka fampiraisana ny foko eto Madagasikara raha tsy taminny taonjato faha-19, taona maromaro talohanny fanjanahantany, ny foko nanitatra ny fanjakany midadasika indrindra teto Madagasikara talohanny fanjanahantany taminny taona 1896 dia ny foko merina, avy any Indônezia, ka ny fanjakana dia mitondra ny anarany hoe Fanjakana merina.
Ireto ny foko malagasy sasany: ny Antefasy, ny Antemoro, ny Antesaka, ny Antankarana, ny Antambahoaka, ny Antandroy, ny Antanosy, ny Bara, ny Betsimisaraka, ny Betsileo, ny Bezanozano, ny Mahafaly, ny Merina, ny Sakalava, ny Sihanaka, ny Tanala, ny Tsimihety ary ny Zafisoro.
3. Ny fiteny malagasy
Ny fiteny malagasy dia fiteny ao aminny sampana aostrôneziana, avy any Azia atsimo atsinanana. Ny fiteny malagasy taminny fahatongavany teto Madagasikara dia nindrana teny avy aminny fiteny soahily, fiteny banto mifangaro aminny fiteny arabo, fiteny iray nitondra voanteny maro aminny fiteny malagasy toy ny anarana ampiasaina aminny fanandroana, ary betsaka taminizy ireo no nogasiana ary lasa teny fampiasa aminny teny malagasy ankehitriny. Ny fiteny frantsay sy ny fiteny anglisy indray dia nitondra ireo voambolana ara-teknika toy ny teknika, ny jeografia, ny jeolojia, ny solosaina sns.
Tsy dia ranoray ny teny malagasy. Ny teny malagasy ampiasaina aminny fandraharahana sy atao hoe "teny malagasy ofisialy", aminny ankapobeny, dia avy aminny fiteny merina taloha.
Wikipedia: Malagasy (vahoaka)